अमेरिकाको घटिया हर्कत दुनियाका आँखामा छारो हाल्दै रुसबाट पहिले भन्दा झन् धेरै…. — Imandarmedia.com
अमेरिकाको घटिया हर्कत दुनियाका आँखामा छारो हाल्दै रुसबाट पहिले भन्दा झन् धेरै….
काठमाडौं। एक रुसी अधिकारीले एकातिर अमेरिकाले रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल किनेर आफ्नो तेलको भण्डार बढाइरहेको र अर्कोतर्फ युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई देखाउँदै अरु देशलाई रुसबाट तेल नकिन्न दबाब दिइरहेको खुलासा गरेका छन्।
रुसी सुरक्षा परिषद्का उपसचिव मिखाइल पोपोभले आइतवार रुसी सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार अमेरिकाले गत साता रुसबाट कच्चा तेल खरिद ४३ प्रतिशतले बढाएको छ।
अर्थात् अमेरिकाले रुसबाट दैनिक एक लाख ब्यारेलभन्दा बढी कच्चा तेल खरिद गरिरहेको छ। चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार रुसी अधिकारीले युरोपले अमेरिकाबाट यस्तै ‘आश्चर्यजनक मनोवृत्ति’को अपेक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पोपोभले भने, यसबाहेक अमेरिकाले आफ्ना कम्पनीहरूलाई रुसबाट खनिज मल किन्न अनुमति दिएको छ। यसलाई अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा मान्यता दिइएको छ।
कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासका लागि युरोप रूसमा निर्भर छ। यो थाहा हुँदाहुँदै अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगीहरू रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गरिरहेका छन्।
रुसको तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिका र बेलायत दुवैतिर दबाब छ। बेलायतले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा चरणबद्ध रूपमा रुसी तेलमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने बताएको छ।
अमेरिकाले रुसबाट अप्रिल २२ सम्ममा तेल र कोइलाको आयात बन्द गर्ने पनि बताएको छ। नर्मल युनिभर्सिटीको सेन्टर फर रुसी स्टडीज अफ इस्ट चाइनाका सहायक अनुसन्धान फेलो कुई हेङले ग्लोबल टाइम्सलाई भने।
रुसमाथि अमेरिकाको नीति दुईवटा पक्षमा आधारित छ एक, रुसको प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि उदारवाद र अर्को, अमेरिकी हितको रक्षा गर्नको लागि व्यवहारिक नीति अपनाउने।
कुई हेङले अमेरिकाले रुसबाट भारी मात्रामा तेल खरिद गरेर तेल बजार नियन्त्रण गर्न चाहेको बताए ।हेङले भने अमेरिकाले सस्तो मूल्यमा रुसी तेल खरिद गर्छ र घरेलु हितको रक्षा गर्न युरोपलाई उच्च मूल्यमा बेच्छ।
अन्ततः, युरोप यसको शिकार बनिरहेको छ। युरोपबाट पैसा अमेरिका जान्छ र डलर युरोको तुलनामा बलियो हुन्छ। विश्लेषकहरूले रुस–युक्रेन संकट र रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा बढी फाइदा अमेरिकालाई भएको बताएका छन्।
रुसको तेल किनेर अमेरिकाले आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूलाई फन्दामा पारेको बताइएको छ। अमेरिकाले अरु देशलाई रुसको तेल किन्न प्रतिबन्ध लगाएर आफूले चाहिँ रुसबाटै तेल किनेर चर्को मूल्यमा युरोपेली मुलुकलाई दिने गरेको छ।
रुसले भारतलाई पनि प्रतिबन्धका बीच सहुलियत दरमा कच्चा तेल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। भारतले रुसबाट पनि तेल लिने विचार गरिरहेको छ। यसबारे अमेरिकाले पनि टिप्पणी गरेको थियो।
अमेरिकाले भनेको थियो ‘सबै देशलाई हाम्रो सन्देश यो हो कि उनीहरूले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको पालना गर्नुपर्छ। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले भनेकी थिइन्।
मलाई लाग्दैन कि भारतले रुसबाट तेल किन्नु अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घन हो, तर यो अवधिको इतिहास लेख्दा तपाईं कहाँ खडा हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुहोस्। रूसी नेतृत्वको लागि समर्थन आक्रमणको लागि समर्थन हो।